Ndiani aive Don Gato, chipfuwo chakatendeka cheAuronplay | Noti Katsi
Encarni Arcoya | | Katsi Dzakakurumbira
Kurasikirwa nechipfuwo, paunenge uine mazuva akati wandei, vhiki, mwedzi kana makore, mamiriro anosiririsa anoita kuti vese vadikani vemhuka vadzikire. Uye mune ino kesi, kana izvo nyaya zvikaenda zvehutachiona, zvakatonyanya kudaro. Auronplay yakazivisa musi waApril 26, 2021 kuti chipfuwo chake chakatendeka, Don Gato, aive afa nechirwere.
"Ini ndapererwa uye panguva imwechete ndizere nehasha nehasha", ndiwo mazwi akaburitswa newetuber paTwitter nezverufu rwemukadzi wake. Asi ndiani aive Don Gato? Kugarisana pakati peAuronplay nekatsi yake kwaive sei? Tichakuudza ipapo.
1 Ndiani aive Don Gato
2 Hwakanga hwakaita sei hupenyu hwechipfuwo cheAuronplay
Ndiani aive Don Gato
Don Gato aive katsi nhema ine maziso egirini. Aive nemakore masere uye aive Auronplay's mascot. Pamwe chete neRoma, imwe yechipfuwo chake, vane nyeredzi mumavhidhiyo ake ekushambadzira nguva nenguva, angave ari munzira, kana kutomboita kuti iwetuber itore chikamu.
Nekudaro, vateveri vaive vave kuziva kuti iyi feline yaigara sei ne youtuber, uye kuti vaviri ava vaifara sei kumba kwavo kuAndorra.
Don Gato akauya muhupenyu hwake munaNovember 2013. Mufananidzo wake wekutanga, pa Instagram, wakaburitswa muna Zvita 7, 2013, achiri mudiki. Muchokwadi, makamera naiye agara aine hukama zvakanyanya. Uye ndezvekuti akagovanawo naye vhidhiyo yekuratidzira maakaratidza vateveri vake kumhuka yake nyowani, katsi kadiki kaikwana kukwana muchanza cheruoko rwake, nhema, inotamba asi ine moyo murefu sezvo aive nayo mumaoko.
Wakambobvunza Auronplay zvaaizoita kana Don Gato akapukunyuka uye iye akapindura: Ngatitarisirei kuti izvo hazvimboitika. Asi kana izvi zvikaitika ndinowira mukuora mwoyo. Ini ndaizochema semwedzi mitatu. Handizive kuti ungade sei mhuka zvakanyanya.
Saizvozvo, iyewo aifanira kusangana nemumwe mubvunzo wakaoma: Chii chingaitika kana Don Gato akafa? «Zuva rinofa katsi yangu, neniwo ndinofa. Ivo chete vedu vane zvipfuwo vanoziva kurwadziwa uko kunogona kukonzereswa nerufu rwechipfuwo.
Hwakanga hwakaita sei hupenyu hwechipfuwo cheAuronplay
Don Gato aive mumwe weakanakisa "shamwari" dzeAuroplay. Kutaura zvazviri, vakawanda vanotenda izvozvo Izvo zvakachinja hupenyu hwetuber uye iyo feline yanga iri nyeredzi mune mazhinji emavhidhiyo ake. Muchokwadi, paYouTube tinogona kuwana mamwe mavhidhiyo umo Auronplay akatamba naye, kana Iyo Adventures yaDon Gato, vhidhiyo mune iye asina kupokana protagonist aive iye.
Aigara padhuze naye, pamwe neRoma, imwe yechipfuwo iyo youtuber inayo uye yagara ichichengetwa zvakanaka, semunhu akanaka anoda mhuka iye zvaari. Iwe waigona kuona kuti aimuda zvikuru uye kuti aigara ari parutivi pake, kunyanya panguva yaaimuda.
Ehezve, mumashoko aAuronplay pachake, katsi yakanga yadzidza "kumurega" nekumuregeredza, asi isu tatoziva kuti mumakati vanotaura zvakawanda kupfuura mazwi uye mumavhidhiyo iwe unogona kuona kuti zvaikwanisa sei kutaura kuburikidza ivo.
Zuva nezuva reDon Gato Aida kuzorora nezuva, kurara uye aisada kuenda panze. Kunyangwe uine akawanda matoyi, makwati, nezvimwe. chinhu chakajairika ndechekuti aigara ari padyo neAuronplay, kungave padhuze naye kana pamusoro pake, chiratidzo cherudo rwaaive narwo.
Kune dzakawanda nguva dzinonakidza pakati paDon Gato uye Auronplay. Akagara ari chikamu chemavhidhiyo, kunyangwe asingade, nekuti aikwanisa kupinda mavari asina kana kukokwa, asi achichiva vateveri, avo vakauya kuzomuona semumwe protagonist uye vakamubvunza kuti havana kumuona riini.
Nehurombo, uye kunyangwe hazvo chokwadi chekuti Don Gato anga asiri iye "akura kwazvo", sezvo aingova nemakore masere chete, chirwere chakamuita kuti agamuchirwe kuchipatara chezvipfuyo kuAndorra uye, pakupedzisira, haina kukwanisa kukunda mufananidzo wegiravhiti.
Isu tinotumira kurudziro yedu yese kuAuronplay munguva yakaoma uye inosuruvarisa seiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Katsi Dzakakurumbira » Ndiani aive Don Gato, chipfuwo chakatendeka cheAuronplay